«Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra: Iza moa aho no hankany amin'i Farao sy hitondra ny Zanak'Isiraely hivoaka avy any Egypta? Ary hoy Izy: «Homba anao tokoa Aho; ary izao no famantarana ho anao fa Izaho no efa naniraka anao; rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity hianareo» - Eks. 3:11,12.
Ny fandavan-tena sy ny fanetren-tena no nampiavaka ireo olona nametrahan'Andriamanitra fitokiana manokana amin'ny andraikitra goavana. Ny antso avy any an-danitra niantefa tamin'i Mosesy tany an'efitra dia nampahita azy ny tsy fahatokiany tena be ihany. Tsapany fa tsy vonona ho amin'ny andraikitra niantsoan'Andriamanitra azy izy; kanefa nekeny ny fitokiana napetraka taminy, hany ka nanjary fitaovana voadio teo am-pelatanan'Andriamanitra izy hanatontosa asa lehibe indrindra tsy mbola nankinina tamin'olombelona mety maty.
Raha ohatra ka nitoky tamin'ny herin'izy tenany sy ny fahendren'izy tenany i Mosesy ary maimay fatratra hanaiky ilay andraikitra lehibe dia ho naneho tsy fahavononana tokoa ho amin'izany asa izany. Ny fahitan'ny olona ny tsy fahombiazany dia maneho marimarina farafahakeliny ny mahagoavana ny andraikitra nankinina taminy ary maneho aratra izany fa hanao an'Andriamanitra ho mpanoro hevitra azy sy ho heriny izy. Ny olona toy izany dia tsy hanao dingana lavitra na haingana tsy ho eo ambany fitarihan'Andriamanitra.
Hahazo hery sy fahombiazana ny olona manaiky ny andraikitra napetrak'Andriamanitra taminy ka mikatsaka fatratra amin'ny fanahiny manontolo hanitsy ny tenany amin-kitsim-po ho mendrika hanatontosa izany araka ny tokony ho izy. Na dia tsotsotra aza ny toerana misy izany olona izany, na dia voafetra ihany aza ny fahaizany dia hahatratra haavo tena ilaina amin'ny antson'ny adidy izy, hitoky amin'ny hery avy any an-danitra ka hikatsaka ny hampahamendrika hatrany ny asany amim-pahatokiana. Hahatsapa izy fa asa masina hiady amin'ny ratsy no ataony, hanome hery bebe kokoa ny fahazavana, hanandratra, hampahery, ary hitondra fitahiana ho an'ny mpiara-belona. Tsy tokony hanan-toerana eo anatrehan'izany antso masina sy avo izany ny fitsilamodamohana, ny fitiavan-tena, ny fitiavana hodokadokafan'izao tontolo izao.
Rehefa mitolo-batana ho amin'ny asa toy izany ny olona iray, na dia marefo aza dia hanjary matanjaka, na dia kanosa aza dia hanjary mahery fo, na dia mpisalasala aza dia manjary hentitra sy matotra amin'ny fanapahan-kevitra. Ny tsirairay dia hahita ny maha-zava-dehibe ny toerana misy azy sy ny andraikitra tontosainy, indrindra indrindra raha ny lanitra no nifidy azy hanao asa manokana ho an'ny Mpanjakan'ny mpanjaka. Ny olona toy izany dia handao bebe kokoa an'izao tontolo izao satria efa niaina tao rahateo izy. Ny hery miasa mangina avy aminy dia hanandratra, hanadio, hampahamendrika izay rehetra mifanerasera aminy ka hanomana ny mpiara-belona ho amin'ny fitsarana any an-danitra. - ST, 11 Aog. 1881.